Sharafta 50: FAQs, Faahfaahinta iyo Taariikhda La bilaabay | BehMaster
Bogga ugu weyn/Android/Sharafta 50: Su'aalaha la isweyddiiyo, Tilmaamaha iyo Taariikhda la bilaabay
Sharafta 50: Su'aalaha la isweyddiiyo, Tilmaamaha iyo Taariikhda la bilaabay
Honor 50 waa taleefan casri ah oo soo socda. Maqaalkan, waxaan kaga hadli doonaa tafaasiisha iyo FAQs ee Maamuuska 50. Waxaan eegi doonaa tilmaamaha oo ka jawaabi doonaa su'aalaha soo noqnoqda ee ku saabsan Honor 50.
Honor 50 ma yahay taageer Dual Sim?
Haa Honor 50 wuxuu la socdaa dual sim setup. (Nano-SIM, laba-goob istaag)
Honor 50 ma taageero 5G?
Haa Honor 50 wuxuu la yimaadaa taageerada 5G sim. Waxaad ku raaxaysan kartaa 5G casrigan.
Honor 50 ma taageersan yahay 4G?
Haa Honor 50 wuxuu la yimaadaa taageerada 4G sim. (Nano-SIM, laba-goob istaag)
Sharafta 50 ma taageertaa NFC?
Haa Honor 50 waxaa lagu soo bandhigi doonaa taageerada NFC.
Sharafta 50 ma taageertaa Raadiyaha FM?
Haa Honor 50 wuxuu la socdaa raadiyaha FM. Waxaad furi kartaa barnaamijka raadiyaha FM-ka oo waxaad ku raaxaysan kartaa muusikada.
Honor 50 ma yahay telefoon aan biyuhu lahayn?
Haa Honor 50 waa telefoon aan biyuhu lahayn. Waxay heshay qiimeynta IP68. Marka lagu daro qiimaynta muuqaallo badan oo YouTube ah oo ku saabsan tijaabada biyaha ayaa noo sheegaya in taleefankani aanu biyuhu ilaalinayn.
Honor 50 ma taageertaa dallacaadda Wireless-ka?
No. Honor 50 kuma imanayo taageero dallacaadda Wireless. Kuma dallaci kartid dabaysha Wireless-ka.
Honor 50 ma leeyahay baytari la saari karo?
Maya. Honor 50 kuma iman kartida meesha looga saarayo baytariga. Waa wax caan ku ah casriga cusub maadaama ay u ogolaato soosaarayaasha inay batteriga ku dhejiyaan qaab kasta oo ay kordhiyaan awoodda batteriga.
Sharafta 50 ma la socotaa ogeysiisyada LED?
Haa Sharafta 50 waxay la socotaa muuqaalka ogeysiisyada LED. Waxaad awood u siin kartaa qaybta Settings ee taleefanka.
Ma yahay Honor 50 taageerada sawirka faraha?
Haa Honor 50 taageer sawir sawir-faraha. Waxaad u isticmaali kartaa inaad ku furto taleefankaaga casriga ah oo aad sidoo kale sawirro ka qaaddo adigoo ku dhejinaya sawirka faraha
Sharafta 50 ma taageertaa Aqoonsiga Wajiga?
Haa Sharafta 50 waxay la socotaa taageerada FACE ID. Waxaad isticmaali kartaa aqoonsiga FACE si aad isla markiiba u furto taleefankaaga casriga ah.
Sharafta 50 ma taageertaa duubista Shaashada?
Haa Sharafta 50 waxay la socotaa duubista Shaashada si caadi ah. Waxaad u baahan tahay inaad furto Xarunta Waxqabadka ka dibna ku dhufo duubista shaashadda si aad u isticmaasho muuqaalka duubista Shaashada.
Honor 50 ma la heli karaa offline?
Haa Honor 50 waxa kale oo laga heli karaa suuqa casriga ah ee khadka tooska ah. Waxaad ka iibsan kartaa dukaanka ama suuqa kuugu dhow.
Maamuuska 50 ma yahay casriga ciyaaraha?
Haa Honor 50 waa talefanka casriga ah ee ciyaaraha waxaanad ku raaxaysan kartaa ciyaaraha dhamaadka-sare ee casrigan.
Sharafta 50 ma u fiican tahay PUBG?
Haa Sharafta 50 waxay si fudud u socodsiin kartaa ciyaarta PUBG oo waxaad ku raaxaysan kartaa ciyaarta Battleground adoon wax daahin ama cuncun ah lahayn.
Sharafta 50 ma u fiican tahay Fortnite?
Haa Sharafta 50 waxay si sahal ah u socodsiin kartaa ciyaarta Fortnite waxaadna ku raaxeysan kartaa ciyaarta Battleground adoon wax daahin ama cuncun ah lahayn.
Sharafta 50 ma u fiican tahay wacitaanka Waajibka?
Haa Sharafta 50 waxay si fudud u socodsiin kartaa ciyaarta mobilada ee Wicitaanka Duty waxaadna ku raaxaysan kartaa Battleground iyo ciyaarta ciyaartoy badan iyada oo aan wax daahin ama cuncun ah lahayn.
Honor 50 ma u fiican yahay FreeFire?
Haa Sharafta 50 waxay si fudud u socodsiin kartaa ciyaaraha fudud sida FreeFire oo waxaad ku raaxaysan kartaa ciyaarta Battleground iyada oo aan wax daahin ama cuncun ah lahayn.
Honor 50 ma taageersan yahay Android 12?
No. Honor 50 kuma jiro Android 12. Weli waad ku rakiban kartaa ROM-ga gaarka ah si aad u hesho taageerada Android 12.
Haddii aad heshay maqaalkan ku saabsan Honor 50 FAQs iyo tilmaamo xiiso leh. Fadlan ku wadaag baraha bulshada oo ku dheji @droidmaze Twitterka. Sidoo kale su'aashaada ku weydii qaybta faallooyinka waxaanan cusbooneysiin doonaa boostada su'aalahaaga iyo jawaabtaada.
Naga raac Twitter si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay iyo wararka ku saabsan Android iyo Google.
Vivo V21e 5G: FAQs, Tilmaamaha, iyo Taariikhda la bilaabay
Nokia C30: FAQs, Faahfaahinta iyo Taariikhda la bilaabay